Part 1: Gịnị bụ a M4V faịlụ?
Part 2: Olee otú Play M4V Files na a VLC Media Player on Windows?
Part 3: Olee Play M4V Files na a VLC Media Player on Mac?
Part 4: Gịnị mere VLC apụghị egwu ụfọdụ M4V faịlụ?
Part 5: A kasị mma VLC nnyemaaka
M4V File bụ faịlụ ndọtị, nke na-eji maka video usoro. Nke a M4V File na-mepụtara Apple na ọ fọrọ nke nta otu ka MP4 File. Otú ọ dị, ndị a M4V Files na-nyere otu nhọrọ nchebe nke itinye n'ọrụ nke DRM oyiri nchebe. Ihe nke a DRM Copy Nchedo ime bụ ihe a chọrọ na ikike site na kọmputa na akaụntụ, nke a na-eji maka zuo nke ndị na-echebe videos. N'ihi ya, na a ụzọ, M4V Files, nke na-echebe na-kpam kpam na-echebe site ndị megidere iwu eji na play site onye ọ bụla, ndị na-adịghị ikike.
Ndị a M4V Files na-eji site Apple encode video faịlụ dị ka na fim, TV ngosipụta, na music videos, na ya iTunes Store.
The unprotected M4V Files nwere ike na-egwuri na ọ bụla usoro, na-enweghị ihe a chọrọ n'aka nke ọ bụla ikike nke ụdị ọ bụla. N'ihi ya, na abụọ ahụ Windows na Mac, na VLC Media Player nwere ike igwu M4V Files. Ebre nke n'enweghị ikike M4V Files na VLC Player on Windows nwere ike mere na usoro nke na-agbanwe agbanwe extensions nke faịlụ site na M4V ka MP4.
Otú ọ dị, na-agba ọsọ ikike M4V Files na a VLC Player on Windows, ị n'ezie mkpa nbanye nkọwa nke iTunes akaụntụ nke e ji mee ihe ịzụta faịlụ. Mgbe nkwenye site na akaụntụ, faịlụ pụrụ n'ụzọ dị mfe na-egwuri site iTunes. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu ya site VLC, ihe a chọrọ na ntughari nke faịlụ site M4V ka MP4 a chọrọ. Otú ọ dị, e nwere nnọọ ụzọ ọzọ na-egwu na-echebe Video faịlụ. Ọ nwere ike na-eme site na usoro nke wepụ iTunes DRM Copyright Nchedo na mgbe ahụ na-agbanwe agbanwe usoro nke faịlụ site tọghatara iTunes DRM M4V ka larịị M4V faịlụ.
Nkebi nke 3: Olee otú iji Play M4V Files na a VLC Media Player on Mac?
Mgbe, anyị na-ekwu nke M4V Files, VLC Player na Mac, ngwọta bụ fọrọ nke nta ahụ dị ka nke na windo.
The ikike M4V Files nwere na-nkwado iwu site na ịbanye na si na akaụntụ, nke a na-eji maka zuo nke video. Mgbe nkwenye usoro, faịlụ pụrụ ịbụ nnọọ mfe-egwuri site iTunes ma ọ bụ VLC Player. N'ihi na VLC Player, faịlụ nwere na-converted si M4V ka MP4. Ọ bụrụ na, ị chọrọ igwu na-echebe faịlụ na-enweghị akaụntụ nkwenye, ihe ngwọta dị ka e kwuru n'elu na Windows ngalaba esetịpụ ezi ihe, ebe a, ie, usoro nke mwepụ nke iTunes DRM Nchedo na-agbanwe agbanwe format si DRM M4V ka larịị M4V faịlụ .
The unprotected faịlụ nwere ike nnọọ mfe a ga-egwuri na Mac na n'otu ụzọ ahụ dị na Windows. Faịlụ akakabarede a ga-eme si M4V Format ka MP4 Format na otu usoro nwere ike soro dị ka nke Windows na-agba ọsọ na M4V Files na Mac.
Nkebi nke 4: Gịnị VLC apụghị egwu ụfọdụ M4V faịlụ?
E nwere ọtụtụ ihe n'ihi na nke M4V faịlụ-apụghị egwuri na VLC Player. N'etiti ha, na nwebisiinka ma ọ bụ nchebe bụ n'elu kasị ihe mere otu ihe ahụ. Na ikike ga-achọrọ maka otu ihe ahụ. DRM Copyright nchebe bụ nnọọ ihe ọzọ mere, nke na-egbochi ndị VLC Player si na-agba ọsọ dị otú ahụ faịlụ. The na-ekwesịghị ekwesị format, ie M4V File format bụ ọzọ mere, nke ahụ na-egbochi ndị VLC Player si na-agba ọsọ faịlụ ọma.
Part 5: A Best VLC nnyemaaka
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ otu ndị dị otú ahụ magburu onwe ngwa, nke nwere nnukwu collection nke ọsọ ọsọ na mmepụta faịlụ extensions na na ọnụ ọgụgụ bụ karịa 150. Na oké nkwado na ọmarịcha atụmatụ tinyere oké ọsọ, na Wondershare Video Converter Ultimate bụ nhọrọ kasị mma maka ndị na-achọ na-egwu M4V Files na VLC Player.
Ngwá ọrụ a nwere ike eme ka video Ntụgharị si otu ụdị nke ọzọ. Ọ nwere ike na ezi mfe tọghata ọ bụla M4V faịlụ ka MP4 na dị otú ahụ. Na Wondershare Video Converter Ultimate, VLC media Player ọkọkpọhi nnukwu nkwado na-agba nile di iche iche nke mgbasa ozi faịlụ na pụrụ ịbụ nnọọ mfe a ga-arụ ọrụ na.
N'ihi na nke a, i kwesịrị ịgbakwunye M4V faịlụ pụtara n'ihi na akakabarede na interface nke Wondershare Video Ntụgharị. Lee snapshot dị ka n'okpuru.
Ịgbakwunye faịlụ, wee pịa na chọrọ mmepụta format site na iji dobe ala menu na pịa na tọghatara menu ugbu na ala n'aka nri n'akụkụ nke interface. Mgbe faịlụ a converted, ị nwere ike mfe-egwu faịlụ dị ka na mgbe ọ dị mkpa na VLC Player.
> Resource> VLC> Olee otú iji Play M4V Files na a VLC Media Player?